Tsvaga akanakisa manomano ekukura bvudzi rako | Bezzia
Tricks kukura bvudzi
Susana Garcia | 10/06/2021 20:00 | Runako, Runako manomano
Pane dzakawanda nguva isu isu tinocheka vhudzi uye tinenge pakarepo toda kuti ikure zvakare kuva nebvudzi rakanaka zvakare. Kunyangwe hazvo mazuva ano vhudzi rine midi uye mapfupi akacheka akapfeka zvakanyanya, kune vanhu vazhinji vanoda kuti vhudzi ravo rikure riine mane akareba. Saka isu tichaona mamwe manomano kuitira kuti iro bvudzi rikure zvishoma nekukasira uyezve riwanezve bvudzi refu naro rekugadzira magadzirirwo ebvudzi.
Kune zvimwe hunyengeri hwekukura bvudzi, kunyangwe tichifanira kuziva kuti vhudzi rine hurefu hwakagadzwa nemajini uyezve kumhanyisa kwekukura kwebvudzi kunoenderana nemunhu wega wega. Asi mukati memiparamende iyi tinogona kuita kuti bvudzi rikure zvirinani uye kunyange kuribatsira kukura chimwe chinhu nekukurumidza uye chakasimba
1 Usatarisira zvishamiso
2 Ngwarira paunogeza
3 Shandisa rosemary
4 Tora zvinowedzera
Chinhu chekutanga iwe unofanirwa kuziva ndechekuti haufanire kutarisira minana, sezvo kazhinji vhudzi remunhu wese rinotora kukura uye kukura masentimita imwe chete mwedzi wega wega. Asi mukati meizvi, isu tinogona nguva dzose kubatsira bvudzi kuti rikure zvishoma uye riine simba rakawanda. Izvo zvakakosha kuti usave netariro yakawandisa yekuwana mane munguva pfupi. Kana isu tine chiitiko uye isu tichida kuratidza bvudzi isu tinogona kugara tichitsvaga kune akakura ekuwedzera.
Kugeza is a tsika yatinofanira kupa kukosha kwazvinako. Kugeza bvudzi kwakakosha kuti rikure riine hutano sezvo tsvina ichibviswa munzvimbo yemusoro, asi kuisuka yakawandisa kunogona kuikuvadza nekukuvadza ganda remusoro, kunyangwe kuchikonzera kudonha kana kutyoka, izvo zvinoita kuti riite kunge rakapfupika uye risina hutano hwakanaka. Iwe unofanirwa kuishambidza neshampoo chaiyo, kana zvichibvira shampoo yechisikigo isingabvisi mafuta kubva mubvudzi rako uye isingawedzere silicone kana parabens mune fomula. Geza zvinyoro nyoro munzvimbo yeganda, uchirega sipo ichidhonzera kumacheto asi pasina kukwiza.
El conditioner uye mask zvakakosha kuti unyorove bvudzi uye chengetedza magumo, ayo anowanzoomesa zvakanyanya. Iyo conditioner inofanirwa kushandiswa mazuva ese isu patinogeza bvudzi redu, asi iyo maski inoshandiswa chete pano neapo. Izvi zvigadzirwa zvinotibatsira kuti titarisire magumo nekuzvidzivirira kubva pakupaza nekuparadza, zvichikonzera vhudzi kurasikirwa nechikamu chehurefu hwaro mukuita.
Rosemary chigadzirwa chinobatsira bvudzi kukura zvakanaka nekuti chinobatsira kusimudzira kutenderera munzvimbo yemusoro. Kana kutenderera kwakanaka, inodiridza mvere dzemvere dzichiita kuti bvudzi rikure zvirinani. Kune zvimwe zvigadzirwa zvine rosemary asi mune chero mamiriro ezvinhu iwe unogona kumisikidza nemuti uye kushandisa iyo mvura kukwiza musoro wako. Iwe unofanirwa kuzviita kanoverengeka pasvondo kuti uone kuvandudzwa. Uye zvakare, izvi zvinobatsira kuti vhudzi ridonhe zvishoma munguva dzakadai sematsutso. Izvi zvinobatsira kuvandudza kutenderera uye kuita kuti bvudzi rikure nekukurumidza.
Kana bvudzi rako rikasasimba rinogona kugara riri nekuti unoshaya chimwe chikafu. Iyo Bvudzi rinowedzera rinogona kubatsira zvakanyanya munguva Inowira mairi asiwo kana ichinge ichikura, nekuti kana tikaitora inowanzo kukura yakasimba, sezvo iine zvinovaka muviri zvinodiwa. Kune akawanda ekuwedzera asi zvinenge zvese zvine zvinovaka muviri zvakaita se zinc, vitamini B, iron kana biotin, nekuti ese anobatsira kuumbwa kwebvudzi uye kukura kwaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Tricks kukura bvudzi
Maitiro ekubvisa mapundu kubva kumashure
Maekisesaizi kutetepa makumbo